FIATREHANA NY COVID -19 : Hofehezina ny fidirana an’Ambanja, vavahadin’i Diana sy Sava
Mba hisoroana amin’ny tsy hiparitahan’ny valanaretina coronavirus dia nandray fepetra ireo tompon’andraikitra avy amin’ny Cco Diana, amin’ny fanaraha-maso ireo fiara miditra ao Ambanja. 8 juillet 2020
Araka izany, nohamafisina ny fisavana eo amin’ny sakana ara-pahasalamana izay hita eo am-pitan’ny tetezana Sambirano ao an-toerana.
Raha ny aty amin’ny Faritanin’Antsiranana teo aloha no resahina dia ao Ambanja no fidirana na vavahady miditra aty amin’ny Faritra Diana sy Sava, raha avy any amin’ny tapany atsimo mampiasa ny lalam-pirenena fahaenina. Nandraisana fepetra, araka izany, ny fidirana ao Ambanja mba hahafahana manara-maso ireo fiara miditra sy ireo mpandeha ao anatiny. Satria araka ny fantatra dia mifindrafindra fiara ireo mpandeha avy any Antananarivo sy avy amin’ireo toerana efa ahitana tsimokaretina.
Tsy takona afenina amin’izao ny fihanaky ny valanaretina coronavirus izay mitombo isan’andro tao anatin’ny telo volana lasa izay. Araka izany, tsy nitazam-potsiny ireo tompon’ andraikitra avy aty an-toerana nandray ireo fepetra ireo mba hifehezana amin’ny mety hiparitahan’ny tsimokaretina covid-19, na dia mbola tsy ahitana olona mitondra ny soritr’aretina aza ato anatin’ny Faritra Diana.
Ankoatra izany dia efa mampihatra ny fanasaziana amin’ny fanaovana asa iombonana amin’ izay tratra tsy manao aron-tava ihany koa ny aty Diana, mba hahafahan’ny tsirairay manazatra tena ny mitafy aron-tava raha mivoaka ny trano.
Azo heverina fa ny tsy fanajana ireo toromarika omen’ny Fanjakana no mampitombo isan’andro ny valanaretina, ka ilaina ny hanajana ireo fepetra izay hita fa tsotra nefa ahafahana miaro tena sy ho an’ny hafa.
Azo ambara fa manao ezaka hatrany ny Fanjakana amin’ny fomba rehetra hoentina hamehezana ny valanaretina. Ilaina ny fanajana ireo toromarika, amin’izany dia heverina fa tsy misy ny hanome tsiny, satria samy tompon’andraikitra amin’ny tsy fiparitahan’ny valanaretina ny tsirairay mba hisoroana ny fihanak’izany. Lahy tokana ny aina fa tsy sanatria ny fankahalana ny Fitondrana no hanaovana tsinontsinona ireo toromarika. Tsara marihina fa misy eto amintsika ny valanaretina coronavirus ka ilaina fitandremana hatrany.
Hentitra ny fanaraha-maso an’ireo fepetra napetraka ao Analamanga
Hentitra ny fanaraha-maso ny fampiharana an’ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra napetraka ao anatin’izao fihibohana vaovao izao. Tsy mitsitsy amin’ny fandraisan’andraikitra sy ny fampiharana ny sazy ho an’izay minia tsy manaraka izany ireo manam-pahefana.
Andro voalohany amin’ny fiatrehan’ny mponina ato anatin’ny Faritra Analamanga ny fihibohana vaovao omaly, araka ny fanapahan-kevitra noraisina faran’izay haingana tao anatin’ny filan-kevitry ny Minisitra, eo anatrehan’ny fipariahan’ny tsimokaretina Coronavirus eto Antananarivo.
Hentitra ny fanaraha-maso indrindra ho an’ireo faritra voasokajy ho mena amin’ny valanaretina eto an-drenivohitra. Anisan’izany ny boriborintany voalohany sy ny boriborintany fahadimy. Rakotra mpitandro filaminana tamin’ireo toerana ireo ary tsy ireo ihany fa hatramin’ireo toerana be olona eto Antananarivo. Zandary, Tafika ary Polisy an’arivony no niara-nahetsika manerana ny tanàna hiambina sy hanara-maso izay mety mbola tsy fanarahan-dalàna ataon’ny olom-pirenena sasany. Hentitra ny fanaraha-maso sy ny fanentanana ny olona hanaja an’ireo fepetra ara-pahasalamana izay napetraky ny Fitondram-panjakana.
Raha tsiahivina dia fepetra maro no noraisin’ny Fitondram-panjakana mba hifehezana an’ity valanaretina ity eto Antananarivo. Manomboka amin’ny 12 ora dia tsy misy mahazo mivoaka ny trano avokoa ny olona rehetra, mikatona tahaka izany ihany koa ny toeram-pivarotana rehetra ankoatra ireo efa notsongaina manokana. Anisany andraikitra lehibe nosahanin’ireto farany ny fanampiana ireo mpivarotra hangorona sy hanakatona ny tsena vao nipaika ny fetran’ora ahafahana misokatra. Hatreto dia mbola manatanteraka hatrany ny fanentanana ireo mpitandro filaminana mialoha ny tena hampiharana ny sazy. Ny sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, ny Jeneraly Ravalomanana Richard dia nampahatsiahy fa mahavoasazy ny tsy fanarahana an’ireo fepetra ireo, indrindra ho an’ireo olona mikasa hanararaotra ny toe-java-misy ankehitriny. Tsy misy fiara fitateram-bahoaka mahazo miasa, ny fiarakaretsaka irery ihany no afaka manohy ny asa fitaterana, saingy tsy maintsy manaja an’ireo fepetra rehetra. Ho an’ireo môtô na fiaran’olon-tsotra manao fitaterana an-tsokosoko kosa dia henjana ny fepetra hampiharina amin’izy ireo raha tratra, toy ny fampidirana am-balam-pamonjana na mety hiafara amin’ny fisintomana ny taratasy fahazoan-dalan’ny mamily fiara. Tanjona ao anatin’ireo fepetra rehetra noraisina ireo ny fifehezana tanteraka ny tsy hiparitahan’ity valanaretina ity eto an-drenivohitra.
Mpanjono sy Avotra Isaorana